Sensor 3-axis gyroscope + 3-axis accelerometer
Bhatiri mhando: 2 * AAA
Simba rekushandisa remuchina wese: iyo irikushanda ikozvino iri pasi pegumi mA mune isiri-yezwi nyika, uye yazvino isingasviki gumi nemashanu mA mune izwi renyika. Kana chigadzirwa chisiri kushandiswa, iyo yekumusoro control inongoerekana yapinda mune yekurara mamiriro
Chinyorwa: ABS + silicone
Ruvara: nhema, chena, yakagadzirirwa
Kurongedza: chinogamuchira + kure kudzora; Ruvara bhokisi dhizaini
1. 2.4G mhepo stereo mbeva
2. 2.4G isina waya keyboard
3. Six-axis inertial sensing tekinoroji inotsigira somatosensory mitambo
4. Infrared remote control + infrared kudzidza uine mamwe makiyi
5. Cursor imwe kiyi kukiya
6. Tsigira Android, Windows, Mac OS, Lilux nemamwe masisitimu anoshanda
7. Daro rekudzora rinopfuura 10M
1. Yakavakirwa-mukati-matanhatu-axis inertial sensor, 360 ° yemahara nzvimbo yekufamba kwekuziva uye kuona, chaiyo uye inoshanduka kutonga;
2. 2.4G isina waya radio frequency tekinoroji, yakakwira bandwidth uye yakasimba kugadzikana;
3. 1: 1 somatosensory kutonga uye kufamba kunozivikanwa, kunoshamisa mushandisi ruzivo;
4. 2.4G isina waya keyboard yekuisa basa;
5.Rinodzora kure kudzora uye mamwe makiyi ekudzidzira mabasa;
6. Iyo 3D mbeva inokwenenzvera mashandiro echinyakare Optical mbeva: yakakwira resolution (160DPI), kumhanya kwazvo (125 mafuremu pasekondi), hapana kutsauka, kuenderera kamwe chete kwepikisheni kufamba, chaiyo kumisikidza uye kudzvanya pasi pekukurumidza kufamba;
7. Plug uye play, kumisikidza-isina kuisirwa, yakagadzirirwa uye yakagadziridzwa kune iyo Android system, nyatso kuona huchenjeri hwevanhu-komputa yekudyidzana kunyorera, uye kuwedzera ruzivo rwevashandisi;
8. Nyatsoona zviito zvekuratidzira, gadzirisa kutsigira dzakasiyana-siyana nzira yekushandisa mashandiro ekudzora uye mimwe mitambo yemitambo; tsigira ese 2D mbeva kudzora, uye tsigira mapfupi ekudzora nzira zvinoenderana nembeva zvimiro (zvinoda APK application rutsigiro);
9.Yakareruka uye inonzwisisika, yakapusa kushandisa uye zvachose yemahara kushandisa inonzwisisika yekudzvinyirira modhi, vashandisi vatsva vanogona kukurumidza kuishandisa zvine hunyanzvi, uye mashandiro evakwegura nevana haana chipingaidzo;
10. Inzwi basa rinogona kuwedzerwa kana kwete. Zviri kune zvinodiwa nevatengi.
Pashure: China IR Remote Kudzora Quote - IR kure kudzora - Doty
Zvadaro: 2.4G keyboard keyboard mhepo
2.4g Rf Remote Kudzora
2.4g Wireless Remote Kudzora
2.4ghz Wireless Remote Kudzora
2.4G Izwi Remote Controller Ine IR Rinoshanda ...
G10 2.4G Wireless inofamba ichiona google voice a ...